1ukungena kwe-xbet kukhabhinethi yomuntu siqu, ukungena kwe-xbet kukhabhinethi yomuntu siqu
Uhlelo lokusebenza lweselula
Ngemvume siqu iKhabhinethi 1xbet
Umhlaba wokubheja uhlukile futhi inani lezinkampani zokubheja likhula minyaka yonke, kodwa akekho umdlali ababengeke bazi 1xbet ehhovisi. Le nkampani isimemezele njengeyona ehamba phambili:
Esinokwethenjelwa – inkampani iphoqelekile ukukhokha ama-winnings kubadlali kuze kufike enanini elibekwe yinkampani okungaphezulu kokungaphezulu 1 ama-ruble ayisigidi
Isitebele – lapha abadlali bazohlala bethola ukubheja okuthandwa kakhulu
Okuhlukahlukene – inkampani ayinikezi ukubheja kwezemidlalo kuphela, kodwa futhi nokubheja kuma-sweepstake, ukubheja ezinhlelweni zezinkulumo, amakhasino aku-inthanethi nokunye okuningi.
Ukuze abadlali baqale ukubheja, udinga ukudala i-akhawunti yomuntu siqu, ukwenza lokhu, kufanele uqale ngokusebenzisa inqubo yokubhalisa ngenye yezindlela ezihlongozwayo:
Ngokusebenzisa inombolo yeselula
Ngokuxhumana nabantu (Vkontakte, Imeyili ye-Google, Odnoklassniki)
Imisebenzi esemqoka yekhabethe lomuntu siqu
IKhabethe lomuntu siqu ehhovisi lenziwe lula ngangokunokwenzeka, yethula izigaba ezilandelayo:
Imininingwane yomuntu – nalu lonke ulwazi mayelana nama-akhawunti womdlali, imininingwane yakhe kanye nekheli le-imeyili elibhaliselwe i-akhawunti. Futhi, kulesi sigaba umdlali angashintsha imininingwane ngaye, izilungiselelo eziyisisekelo nephasiwedi.
ISITIMA – Kulesi sigaba, abadlali banikezwa ithuba lokushintshanisa amaphuzu anqwabelene ngemiklomelo ebalulekile evela enkampanini kabhuki. Ukuze usebenzise lesi sici, udinga ukugcwalisa ifomu bese uxhuma imali Yemali Yomdlalo.
Uhlelo lozakwethu – kulesi sigaba ungaphetha isivumelwano sokubambisana nenkampani. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuba newebhusayithi noma ikhasi ekuxhumaneni nomphakathi okuhlobene nezemidlalo.
Impumelelo yakho – lapha ungabona izibalo zokubheja okuwinile nayo yonke imidlalo nokubheja lapho umdlali ake abamba iqhaza khona.
Gcwalisa i-akhawunti yakho – Uma uchofoza kule nkinobho, imenyu izovuleka lapho ungakhetha khona ukuthi ungabeka kanjani, kunezinketho ezilandelayo: amakhadi asebhange, Yandex.Money, I-WebMoney, opharetha beselula, Izimali zedijithali.
Susa imali – lapha konke kucacile, ngosizo lwalesi sigaba, abadlali bangakhipha izimali zabo abazinqobile.
Ngokusebenzisa i-akhawunti yomuntu uqobo kungenzeka ukuthi udlulisele imali kumngani, ukusebenzisa lo msebenzi kuyadingeka ukugunyaza inombolo yakho yeselula kusayithi. Lokhu kuyadingeka ngoba ukudluliswa kuqinisekiswa nge-sms-code. Kuyaphawuleka ukuthi akubona bonke ababhuki abanalo msebenzi.
Ngaphezu kwalokho, kwikhabhinethi yomuntu siqu uzothola nesigaba esifana ne- “Amasethingi” kuyo ungenza imisebenzi ejwayelekile ezokwenza kube lula ukubheja, abadlali bangabhalisela izincwadi zezindaba nezenyuso.
Isici senkampani yokubheja ye-1xbet ukuthi ngaphezu kwemisebenzi ejwayelekile, abadlali bangafinyelela kwimisebenzi “Ulayini” futhi “Phila”, okusho ukuthi umsebenzisi angangeza imidlalo ayithandayo ku-Favorites ukuze akwazi ukufinyelela kuyo njalo.
Indlela ngemvume ukuze 1xbet ngokusebenzisa indawo esemthethweni
Kubasebenzisi abaningi, ukudlala ngokusebenzisa indawo esemthethweni ukuphela kwendlela yokuphuma, ngoba ukulanda nokufaka izinhlelo zokusebenza nezinhlelo ezengeziwe zabadlali kuyinkinga. Ngakho-ke, ukufika ku-akhawunti yomuntu siqu ngokusebenzisa isiza esisemthethweni, udinga nje ukungena ngemvume bese ubhalisa, enye yalezi zindlela:
Ngokuchofoza okukodwa – ngokubhalisa ngale ndlela ungafaka ikhabethe lakho siqu, kodwa awukwazi ukubheja futhi udlale amakhasino aku-inthanethi, kanye nokubheja kuma-sweepstake, njengoba lena kuyindlela yokubhalisa engaphelele.
Ngenombolo yeselula – lapha uzodinga ukuxhumanisa inombolo yakho yocingo bese uqinisekisa ukubhaliswa nomyalezo we-SMS ozofika enombolweni ebekiwe.
Amanethiwekhi omphakathi – udinga ukukhetha ipulatifomu: VKontakte, I-Odnoklassniki ne-Google Mail kanye nama-akhawunti wokuxhumanisa ngokufaka iphasiwedi nokungena ngemvume kunethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ubuhle bale ndlela ukuthi awudingi ukufaka idatha ukuze ungene, uzodinga nje ukuthi uchofoze kusithonjana senethiwekhi obhalise ngaso.
Ngekheli le-imeyili – vele ufake @mail bese uqinisekisa ukubhaliswa ngokuchofoza kusixhumanisi esizofika ngencwadi.
Ngena ngemvume ku-siqu iKhabhinethi 1xbet ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza
Uhlelo lokusebenza luhlanganisa kakhulu kakhulu abadlali, iqukethe zonke izigaba ezifanayo nesiza esisemthethweni, uhlelo lokusebenza kuphela ikhasi elilula kakhulu elitholakala ku-Intanethi. Uhlelo lokusebenza lunezinzuzo ezilandelayo:
Abadlali bazokwazi ukufinyelela kuhlelo lokusebenza noma kuphi emhlabeni lapho kune-inthanethi
Ukubhaliswa okusheshayo, okungenziwa futhi kuhlelo lokusebenza
Amandla okufaka nokukhipha imali kwi-akhawunti yokudlala
Uhlelo lokusebenza lusebenza ngokushesha okukhulu kunekhasi elisemthethweni lewebhusayithi
Ukulawulwa kwe-akhawunti okugcwele
Luhle kakhulu uhlelo lokubheja olukhululekile
Ilondoloza umlando wokubheja
Uhlobo lohlelo lokusebenza luyatholakala kuwo womabili amafoni namathebulethi
Ngaphezu kokubheja kwezemidlalo okujwayelekile, abadlali bangathola amanye amathebhu kuhlelo lokusebenza, okungukuthi:
Ukwahlukahluka okuningi kokugunyazwa Isigaba sezibalo asiphelele
Ukubheja ngezibalo Ukusakazwa okuningi okuku-inthanethi kungavulwa ngasikhathi sinye
Ingxoxo ebukhoma nomphathi wokusekelwa kwezobuchwepheshe
Amandla okubamba iqhaza ngokusebenzisa isicelo amabhonasi kanye ukukhushulwa
Uhlelo ingasetshenziswa kusuka kunoma iyiphi idivayisi, Kokubili nge-android ne-iphones, uhlelo lokusebenza aludingi izibuyekezo zakamuva zesoftware, isikhala esanele ngokwanele kudivayisi yakho.
Ukwenza i-akhawunti yomuntu siqu kuselula kuzokwenza umsebenzi ube lula, ngoba lapha konke kulula kakhulu, kusukela kusakhiwo samathebhu kuye kubhejwa.
Imininingwane © 2022